Khilaafka FARMAAJO iyo Rooble ma saameyn karaa hanaanka doorashooyinka? - Caasimada Online
Home Warar Khilaafka FARMAAJO iyo Rooble ma saameyn karaa hanaanka doorashooyinka?
Khilaafka FARMAAJO iyo Rooble ma saameyn karaa hanaanka doorashooyinka?
Muqdisho (Caasimada Online) – Xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa haatan yeelatay weji cusub, kadib markii ay xiisad horleh ka dhex-qaraxday hoggaanka sare ee Villa Soomaaliya, kaas oo ka dhashay shaqo joojintii lagu sameeyey agaasimihii NISA.
Dadka falan-qeeyna arrimaha siyaasadda iyo aqoonyahanada ayaa haatan ka digayA sii socoshada khilaafka soo kala dhex-galay ra’iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uu muddo xilkeedkiisu dhaMmaaday, maadaamo lagu jiro xilli kala guur ah iyo marxlad doorasho.
Haddaba khilaafka Farmaajo iyo Rooble ma saamayn karaa hannaanka doorashooyinka?
Aqoonyahan Maxamed Cabdi Cumar oo ah bare Jaamacadeed oo u warramay BBC-da ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan-yahay in si deg deg ah xal looga gaaro ismari-waaga ka dhashay shaqo ka fariisiinta Fahad Yaasiin, sababo la xiriira kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Maxamed Cabdi ayaa sidoo kale xusay, haddii aanan si degdeg ah lagu soo afjarin khilaafkan cusub uu waxyeeleyn doono hannaanka doorashooyinka billowday ee dalka.
“Arrintan hadda soo cusboonaatay doorashada waxay ku leedahay saameyn baaxad leh , sababta ay saameynta ugu yeelaneyso waxaa ka mid ah in waqtigii la gelin lahaa doorashada iyo qaabkii horay loogu socon lahaa waqtigaas in la gelin doono is jiid-jiid kale iyo dagaal kale oo aanu ku saleysneyn doorashada,” ayuu yiri aqoonyahan Maxamed Cabdi
Sidoo kale wuxuu intaasi raaciyey “Markasta oo is qabsashada sii fogaato waxaa dib u dhacaya doorashada, ficlana waa wax iska muuqdo, haddii aan hadda si dhaqso ah loo xallin,”.
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyada oo xiisada ka qaraxday Villa Soomaaliya ay gaartay meeshii ugu sarreysay, waxaana si aad ah isha loogu hayaa halka uu ku dambeyn khilaafkan cusub.
Si kastaba doorashooyinka dalka ayaa marar badan dib u dhacay, waxaana is jiid-jiidkan uu haatan kusoo aadayaa, iyada oo lasoo saaray jadwalka doorashada ee Golaha Shacabka.
Asad Cabdullahi Mataan - September 17, 2021
MOGADISHU (Reuters) - Somalia's President Mohamed Abdullahi Mohamed on Friday accused neighbouring Djibouti of illegally detaining his national security adviser, a criticism which appeared...
Somali man arrested in stabbing of five people at Italian resort
EU, UK and United States Must Decide If Farmajo Is a Friend or a Foe
English September 11, 2021
Efforts under way to end Somalia leaders’ spat
English September 10, 2021
Somalia on edge as president, PM clash over intelligence chief
English September 8, 2021
Finding the truth of missing intelligence agent [Ikran Tahlil] exposes the cover-up of Villa Somalia
English September 7, 2021
Somalia’s Untapped Resources – Geopolitical Paradigm Shift and Proxy Wars
Spy’s death exposes new faultline in Somalia before elections
EDITORIAL: AMISOM’s Role in Civilian Killings and COVER-UP
English September 3, 2021
Turkey-trained female Somali commandos arrive in Mogadishu
English September 2, 2021
US does have troops in Somalia and Yemen, contrary to Psaki and Sullivan
English August 31, 2021